‘हरेक दृष्टि, आर्थिक कोण’ | आर्थिक अभियान
‘हरेक दृष्टि, आर्थिक कोण’
आर्थिक अभियान अब दैैनिक भएको छ । आर्थिक अभियानको पहिलो दैनिक अंक शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक गरे । अर्थ–राजनीतिक साप्ताहिकको रूपमा प्रकाशन आरम्भ भएको यो पत्रिकाले ‘हरेक दृष्टि, आर्थिक कोण’को अवधारणामा अर्थ–राजनीतिक समाचार तथा विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछ । कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीहरू, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, नीति निर्मातालगायत आर्थिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । दैनिक प्रारम्भको अवसरमा पत्रिकाका प्रकाशक न्यू बिजनेश एज प्रालिले ‘बिजनेश जर्नालिजम् एन्ड प्राइभेट सेक्टर ग्रोथ’ विषयक अन्तरराष्ट्रिय संगोष्ठीको आयोजना गर्‍यो । यसका प्रमुख वक्ता भारतका प्रसिद्ध आर्थिक दैनिक बिजनेश स्ट्यान्डर्डका सम्पादक डा. सञ्जय बारू थिए । उनको मन्तव्यमाथि प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता डा. बारूले आर्थिक बलले मात्र राजनीतिक बल सिर्जना गर्ने बताए । उनले प्राथमिकतामा आर्थिक मुद्दा नपर्दासम्म देशले आर्थिक विकासको फड्को मार्न नसक्ने विश्लेषण सुनाए । ‘आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रमा ल्याउन मिडियाको भूमिका हुन्छ’ डा. बरूले भने, ‘निजीक्षेत्रको विकास र मिडियाको विकास सँगसँगै हुन्छ ।’